Hormarinta Jaamacadda »Jaamacadda Hodges
Doorka waaxda Hormarinta Jaamacadu waa inay kobciso cilaaqaadka ardayda, asxaabta, iyo bulshada weyn ee taageerta himilada dugsiga si loogu diyaariyo ardayda inay ka faa'iideystaan ​​barashada sare shaqooyinkooda shaqsiyeed, xirfadeed, iyo mid bulsho. Kuwa xiriirka la leh Jaamacadda Hodges waxay fahansan yihiin in dugsigani runtii yahay mid gaar ah. Waa bulsho aad u kala jaadjad duwan oo ay ka buuxaan shaqsiyaad dano iyo shaqooyin kala duwan leh.
Halkan, ma jiraan laba wadiiqo oo la mid ah.
Hase yeeshe, meesha keliya ee la wadaago ee qeexaysa deegaankeenna, waa shaqada adag iyo rabitaanka ah in wax weyn la qabto, horay loo sii socdo, iyo in nolol wanaagsan loo abuuro naftooda, qoyskooda, iyo bulshada.
Mar alla markii lagugu xidho Jaamacada Hodges, waa astaan ​​cad oo ah inaad tahay hogaamiye laabta dhabta ah.
Iyada oo in kabadan 6,000 qalinjabiyeyaal ah, Iskaashigeena Waxbarshada Wada Shaqeynta ee sii kordhaya, iyo isku xirnaansheena B2B, waxaa naga go'an inaan si wanaagsan kuugu adeegno qalin jabinta ka dib ama jaaliyad ahaan. Xiriirkaaga aad la leedahay Jaamacadda Hodges wuxuu ina khuseeyaa, iyo waxaan rabnaa inaan kaa maqalno.
Khibradaada, ama arday ahaan ama saaxiib ahaan, waxay qiimo u leedahay koritaankeena iyo dadaalkeena horumarka. Fadlan nala soo socodsiiso waxa aad hadda sameyneyso iyo qaababka aad ku aragto Jaamacadda Hodges adoo xoojinaya kaalinteeda aduunka… iyo dabcan, booqdo badanaa!
Taageeraha Jaamacadda Hodges wuxuu fahamsan yahay in hadiyaddooda ay ku saabsan tahay in maskaxda lagu hayo natiijada ugu dambeysa. Waxay ku saabsan tahay bixinta taageerada loo baahan yahay, waqtiga ugu xasaasiga ah, shaqsi, si ay u dhammaystiraan yoolalka ay leeyihiin - ujeedduna waa udub dhexaadka u ah wanaajinta noloshooda iyo bulshadooda. Dhamaanteen waan ognahay inay waxbarashadu nolosha wax ka badaleyso isbadalkuna uusan ku imaanin mid jaban.
Laakiin, shahaadadaas ama shahaadadaas la kasbaday weligood lama qaadi karo oo shaqsigaasi wuxuu ku guuleystay wuxuu abuuray xubin cusub oo ku hawlan bulshadeena.
Waa taakulayntaada, tan haysata, waana ta beddeli doonta jawiga nolosha.
Kama mahadcelin karno mid kasta oo idinka mid ah oo kugu filan taageeradaas laakiin fadlan ogow inaan isku dayi doonno!
Badbaadi! Fadlan fadlan la xiriir!
Si aad ula wadaagto ururkaaga jaamacada Hodges ama aad waxbadan uga barato qaababka aad ku taageeri karto ardayga jaamacada Hodges, fadlan la xiriir Angie Manley, Agaasimaha Horumarinta Jaamacada, 239.938.7728 AMA emaylka amanley2@hodges.edu.
Fadlan dhagsii xiriirka hoose si aad u muujiso taageeradaada maanta!